Gọọmentị Sweden chọrọ igbochi 'Nazi' Norse runes na ndị Sweden kpọrọ echiche nzuzu asị
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Gọọmentị Sweden chọrọ igbochi 'Nazi' Norse runes na ndị Sweden kpọrọ echiche nzuzu asị
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Gọọmentị Sweden na-eleba anya na ọ ga-egbochi iji Norse runes, ndị mgbasa ozi mpaghara ekwuola, n'agbanyeghị nchegbu nke otu ndị neo-Nazi jirila akara akara oge ochie.
Mịnịsta okwu ikpe Morgan Johansson na-enyocha ugbu a ma a ga-amachibido ndị runes na Sweden ka ọ bụrụ ụzọ iji gbochie otu ịkpọasị asị, akwụkwọ akụkọ Swedish Samhällsnytt kwuru. A na-atụ anya ka ọ nye ndụmọdụ na okwu a site na njedebe nke Mee.
Ọ bụrụ na Johannsson kpebiri ịga n'ihu na iwu na-egbochi runes, mmachibido iwu ahụ nwere ike ịbubata akara Norse niile, onyonyo, na ọla ọdịnala.
Nkwupụta ahụ ewela ọtụtụ ndị Sweden iwe, ndị na-ahụ Norse runes dị ka akụkụ nke akụkọ ihe mere eme ha. N'ihi na ndị na-mata dị ka ndị ọgọ mmụọ ma ọ bụ ndị ọgọ mmụọ, ndị nwere iwu mgbochi a machibidoro dị ka mwakpo na nnwere onwe nke okpukpe, nke na-ekwe nkwa n'okpuru Swedish oruru. Nordic Asa-Community, otu nnukwu okpukpe okpukperechi kachasị na Sweden, ekwuola okwu megide mbọ ọ bụla gọọmentị na-agba iji kpoo ndị uwe ojii nke ihe ochie nke Sweden, na-arụ ụka na "ọkacha mma nke ajọ mbunobi na nghọtahie kachasị mma iji ihe ọmụma na eziokwu gwọọ."
Religioustù okpukpe ahụ adọwo aka ná ntị na igbochi ndị Norse runes na Sweden “ga-ekpochapụ otu akụkụ nke akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị na nkwenkwe - na nnwere onwe ikwu okwu anyị.”
Onye bụbu onye omeiwu na onye otu Sweden Democrats nke aka nri, Jeff Ahl, gosipụtara ụdị nlelị ahụ n'echiche nke mmachibido iwu dị otú ahụ.
“Gọọmentị anyị na-akwado ọtụtụ ọdịnala, mana anyị agaghị enwe ọdịbendị nke anyị. Ihe gọọmentị na-eme ugbu a na-anwa imebi ihe nketa ọdịbendị anyị ma mebie mgbọrọgwụ anyị. Ogidi nke ise, ”ka o dere na Twitter.
Ọtụtụ ndị Sweden ndị ọzọ juputara na soshal midia na nkwupụta na-ekwupụta nkwenye na nlelị. Otu onye ọrụ Twitter kwudịrị na o nwere ọtụtụ egbugbu na-agba ọsọ, ma jọọ ya ọchị ma ọ bụrụ na gọọmentị ga-akwụ ụgwọ maka ịwa ahụ laser iji wepu ihe oyiyi ahụ n'ahụ ya.
Arịrịọ megide mgbochi mmachi malitere site na Nordic Asa-Community nwere ihe karịrị aha 11,000 na Wednesde. Ndị otu a na-enwekwa nzukọ na ebe akụkọ ihe mere eme na Stockholm na Mee 24.
Ọ bụ ezie na Nazi Germany na ndị otu neo-Nazi dị ugbu a ejirila akara Norse maka ọkọlọtọ ha na akara aka ha, taa a na-ahụkarị runes na ekwentị ọ bụla ma ọ bụ kọmputa ọ bụla: Akara maka Bluetooth, nke aha ya bụ Harald Bluetooth, onye ọchịchị Viking nke Danish, na-agwakọta runic Ẹkot leta “H” na “B”.